Ricotta and almond cake - Recipes Thermomix | ThermoRecipes
Ricotta sy mofomamy amandy
Desayuno55 minitraOlona 8280 kaloria
Ity mofomamy ity dia tena matsiro sy be ranony, fomba tsotra hanaovanao miaraka amin'ny Thermomix anao. Ho tianao ny firafiny sy ny fluffiness ary ho hitanao fa tsara ny tsirony.
Ny amygdala voatoto sy ny ricotta ao aminy dia hanao mofomamy sponjy misy tsiro malefaka sy mahafinaritra. Mety tsara ho an'ny fianakaviana manontolo izy io ary azo alaina ho an'ny sakafo maraina sy ho hanina.
Ankafizo ity recipe ity miaraka amin'ireo dingana tsotra izay asehontsika amin'ny horonan-tsary nomaninay. Ho mora sy haingana ny fanaovana izany ary azonay antoka fa haverinao.
1 Ricotta sy mofomamy amandy
Mofomamy tsotra sy haingana azo atao amin'ny Thermomix anao. Ity recipe ity dia manana almond sy ricotta ho singa fototra, mba hanomezana tsiro malefaka sy miavaka.
60 g dibera, malefaka na amin'ny mari-pana
50 g ny lafarinina varimbazaha
Vovo-pisakafoanana 1 sotro fihinanana
Amandy 150 g amin'ny tany
150 g ricotta na fromazy amin'ny trano bongony
Amandy voadidy vitsivitsy
Apetrakay ao anaty vera ny dibera malefaka 60 g, siramamy 150 g ary ny voasarimakirana. Izahay dia programa izany 1 minitra amin'ny hafainganam-pandeha 2.
Ampio ny atody 2 sy ny programa 30 segondra amin'ny hafainganam-pandeha 2.
Ampio ny ricotta 150 g, ny lafarinina varimbazaha 50 g ary ny vovon-tsakafo sotro. Izahay dia programa izany 30 segondra amin'ny hafainganam-pandeha 2.
Amin'ny farany dia ampiana 150 g ny almonds voatoto izahay ary manamboatra azy ireo 1 minitra amin'ny hafainganana 2.
Manomana lasitra 18 sm amin'ny savaivony izahay, raha vita amin'ny silikônina dia tsara kokoa ny mamela azy mora foana. Raha tsy izany dia azonao atao ny manosotra dibera mba tsy hiraikitra ny mofomamy rehefa esorinao ao anaty lasitra. Ampio ny koba, alamino ny fonony ary asio almonds voatetika eo amboniny. Manao izany mandritra ny 40 minitra izahay, miaraka amin'ny hafanana ambony sy ambany. Raha tsikaritrareo fa voatsatso be ny fonony mandritra ny fandrahoan-tsakafo, dia azonao atao ny manarona azy amin'ny foil aluminium mandra-pahavitan'ny sakafo.
Rehefa masaka dia esorintsika ilay izy ary avela mangatsiaka. Arosoy mangatsiaka izany ary ampiarahina amin’ny ronono iray vera mahavelona.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: thermorecipes » Resipeo thermomix » Fivarotana mofomamy » Ricotta sy mofomamy amandy
Pasta miaraka amin'ny bacon, pitipoà ary holatra